မေ့သွားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယ်လို ကျော်မလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
585 Shares 337 Views
Ko Thuya Jul 10, 2018
Android Device ကို PIN Code , Pattern များဖြင့် ကာကွယ်ထားသူများအတွက် မေ့သွားတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Lock Screen ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းများထဲက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း။ ။ Android Device Manager ( Android 2.3 နဲ့ သူ့အထက် )
အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ Android Device Manager ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ Google အကောင့် ထည့်ထားတာနဲ့ ဒီနည်းလမ်းက အလုပ်ဖြစ်ပါပြီ။ ကွန်ပြူတာကနေ Android Device Manager ၀က်ဆိုက်ကို သွားပါ။ သင့် Google အကောင့်နဲ့ Login ၀င်ပါ။ Device ကို ရွေးချယ်ပါ။ Code အသစ်တစ်ခုနဲ့ Lock လုပ်လိုက်တာနဲ့ ယခင် Code အဟောင်းကို Override လုပ်ပေးမှာပါ။
Android Device များမှာ Smart Lock စွမ်းဆောင်ချက် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သူက သင့်နေအိမ်လို စိတ်ချရတဲ့ နေရာများနဲ့ သင့်ရဲ့ စမတ်နာရီလို ကိရိယာများ အနားမှာ သင့် Android Device ရှိနေချိန်မှာ အလိုလို ဖုန်းကို Unlock လုပ်ပေးတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို အဲဒီတည်နေရာနဲ့ ကိရိယာများ အနားကို ယူသွားလိုက်တာနဲ့ အိုကေပါပြီ။ သင့်ဖုန်းမှာ Smart Lock ကို အရင် Set Up လုပ်ထားရမှာပါ။
အချို့ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူများက သူတို့ကိုယ်ပိုင် Security Software များကို ဖုန်းမှာ ထည့်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Samsung ရဲ့ Find My Mobile ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကလည်း အရင် Set Up လုပ်ထားရမှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ Lock Screen PIN သို့မဟုတ် Pattern မေ့သွားရင် ပီစီ သို့မဟုတ် အခြား Device တစ်ခုကနေ Find My Mobile ၀က်ဆိုက်ကို သွားပြီး Unlock လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Password Reset ( Android KitKat နဲ့ သူ့အရင် ဗားရှင်းများ )
သင့်ဖုန်းဟာ Android KitKat နဲ့ သူ့အရင် ဗားရှင်းဆိုရင် ( Lollipop မတိုင်ခင် ဗားရှင်းများ ) PIN နဲ့ Pattern များကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ အလွန် လွယ်ကူပါတယ်။ မှားယွင်းတဲ့ PIN သို့မဟုတ် Pattern ကို ၅ ခါ ရိုက်ထည့်မိတာနဲ့ “ Too many attempts “ ဆိုတဲ့ သတိပေးစာကို မြင်ရမှာပါ။ အဲဒီကနေ သင့်ရဲ့ Gmail နဲ့ Password ကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်တာနဲ့ Lock Screen ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါပြီ။
နောက်ဆုံး နည်းလမ်း။ ။ Factory Reset
ဒီနည်းကို သုံးရင် Android Device မှ ဒေတာများ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်က နည်းလမ်းများနဲ့ အဆင်မပြေမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးဖို့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ပီစီကနေ Android Device Manager ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပါ။ သင့် Google အကောင့်နဲ့ Login ၀င်ပါ။ Factory Reset လုပ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းက ဖုန်းရဲ့ Recovery Mode ကနေ Factory Reset လုပ်တာပါ။ Recovery Mode ထဲ ၀င်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး မတူကြပါဘူး။ အများစုအတွက် ဖုန်းပိတ်ထားစဉ်မှာ Power နဲ့ Volume ခလုတ်များကို တစ်ပြိုင်နက် ဖိပြီး ၀င်ရတာပါ။ သင့်ဖုန်းအတွက် ခလုတ်အတွဲအစပ်များကို အွန်လိုင်းကနေ ရှာနိုင်ပါတယ်။ Recovery Mode ထဲရောက်ရင်တော့ Factory Reset ကို ရှာပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မသှေ့ားတဲ့ Android Lock Screen ကို ဘယျလို ကြျောမလဲ ?
မနက်ဖြန်မှာတွေ့ရတော့မယ့် Nokia X5 စမတ်ဖုန်း